FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DOGO ARZANTINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Dogo Arzantina
Saley the Dogo Argentino amin'ny 17 volana— 'Manana akanjo palitao fotsy i Dogo izay mahatonga azy ireo mora tohina (ary toy ny karazan-damba hafa mifono fotsy sy marenina) dia manoro hevitra aho ny hanome sakafo azy ireo avo lenta, tsy misy voa. Holistic na manta no fomba tokony haleha satria ny zavatra hafa rehetra dia hiseho alahelo amin'ny hatsaran'ny akanjo. '
Ny Dogo Argentino dia antsoina koa hoe Mastiff Arzantina na Dogo Arzantina. Alika lehibe sy mihetsika tsara io. Ny tratrany lalina dia malalaka. Betsaka ny hoditra amin'ny vozon'ny hozatra. Ny loha dia goavambe miaraka amin'ny endrika boribory avy eo aloha ka hatrany aoriana. Somary mitraka ambony ny volo, miaraka amina fijanonana kely ary mitovy halava amin'ny karandohany. Mahery ny valanoranony. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Mainty ny orona. Misaraka tsara ny maso, ary volontany mainty, volontsôkôlà na hazelà. Ny molotry ny maso dia tokony ho mavokely na mainty. Navoaka avo ny sofina ary mazavoa mba hampiorina azy ireo ary miendrika telozoro. Ny ozatra dia be hozatra miaraka amin'ny hock fohy. Matetika dia tsy misy lalandava. Ny rambony matevina dia lava ary entina ambany voajanahary mahatratra ny hock. Ny palitao matevina sy manjelatra dia fotsy ary tsy misy akanjo lava. Na dia tsy ekena amin'ny klioba rehetra aza, indraindray ny Dogo Argentino dia mety misy teboka mainty amin'ny loha fantatra amin'ny anarana hoe 'pirata.' Io toetra miakanjo palitao an'i Dogo io dia eken'ny Federacion Cinologica Argentina.
Ny Dogo Arzantina dia alika tsy mivadika izay manao mpiambina lehibe ny trano sy ny fianakaviana. Milalao ary tena tsara amin'ny ankizy, dia manoroka sy mamihina. Manan-tsaina sy matanjaka be i Dogos, mora ampiofanina raha tsy miovaova, mampiasa fahefana feno fitiavana nefa hentitra. Ny Dogo Arzantina dia tsy karazany ho an'ny rehetra. Amin'ny tompony mety, na dia ny Dogos manjakazaka aza dia mety hanaiky ny olombelona rehetra sy ny biby hafa. Ity karazana ity dia mila olona mahatakatra ny fomba tokony hanehoana ny fitarihana: olona mafy orina, matoky tena ary tsy miovaova. Mila an'io karazana io fitsipika tokony harahiny ary mametra izay misy azy ary tsy mahazo manao. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miara-miaina amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Rehefa apetrakao amin'ny tompona malemy fanahy na tsy mandalo ity karazany ity dia mety hitranga ny olana satria ho tsapan'ny alika fa mila 'mamonjy ny kitapony' izy ary mampandeha ilay fampisehoana. Ny Dogos olon-dehibe dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa, na izany aza, ny Dogo dia tsy matetika mandrangitra ny fifandonana fa mety mahatsapa alika hafa tsy milamina izy. Mila tompona afaka miteny amin'ny Dogo ny karazany fa tsy anjarany ny mametraka alika hafa eo amin'ny toerany. Tsara miaraka amin'ny biby hafa izy ireo raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely. Mila aloha ity mastiff fotsy ity -piaraha-monina miaraka amin'ny biby hafa. Mila aloha ihany koa fanofanana fankatoavana .
Hahavony: 24 - 27 santimetatra (61 - 69 cm)
Lanja: 80 - 100 pounds (36 - 45 kg)
Ity karazana ity dia tsy haninona ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany ary manao izay tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny. Aza hadino ny mitondra ny Dogo ao anatiny rehefa midina ambany ny hatsiaka.
Omeo fanatanjahan-tena be ity alika ity. Mila entina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra na jogging.
Ny palitao tokana dia tena mora karakaraina. Borosio tsindraindray. Ataovy tsara foana ny hoho. Tsy manana fofona alika izy ireo. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Tamin'ny taona 1920 ny Dogo Arzantina dia novolavolain'i Dr. Antonio Nores Martinez sy i Agustin rahalahiny. Ilaina ireo rahalahin'alika tsara sy mpiambina fonosana tsara. Ny karazany izay nampiasaina tamin'ny fampandrosoana dia ny Pyrenees mahafinaritra , Wolfhound Irlandey , manondro , Great Dane , Dogue de Bordeaux , mpanao ady totohondry , Mastiff Espaniôla , Bulldog , Bull Terrier ary izao karazana mastiff lany tamingana antsoina hoe Dog of Cordoba. Ny valiny dia mpihaza mihombo, tsy natahotra izay nanana tanjaka lehibe koa. Ilay palitao fotsy dia nivily lalana ny hafanana fa tsy nokaoka. Mampalahelo fa nahazo laza ratsy tany Grande-Bretagne ny olona rehefa nanomboka nampiasa ny alika hiady amin'ny alika ny olona, ​​izay hetsika mbola malaza any amin'ny faritra maro any Amerika atsimo sy any an-kafa. Raha tokony hanenjika ireo mpiady alika dia namoaka lalàna nasionaly hifehy ny alika imasom-bahoaka i Britain. Ny lalàna momba ny alika mampidi-doza izay niseho tamin'ny 1991 dia mandrara tanteraka ireo karazany telo Fila Brazileiro , Dogo Argentino ary Japanese Tosa . Taranaka fahefatra, ny American Pit Bull Terrier , avela nefa ferana tanteraka. Ireo alika dia tsy maintsy voasoratra anarana, tsy mandeha amin'ny laoniny, manao tombokavatsa na misy microchip ary tompona dia tsy maintsy mitondra fiantohana. Ny alika dia tsy azo ambolena na ampidirina ary rehefa ampahibemaso dia tsy maintsy ampidirina an-tsokosoko izy ireo, ampirimina ary arahin'olona olona mihoatra ny 16 taona amin'ny fotoana rehetra. Tena mahamenatra izany. Rehefa alaina tsara dia alika be daholo ireo. Alika no anaovan'ny tompony azy. Tsy ny karazana rehetra dia natao ho an'ny rehetra. Ampianarin'ny olona hiady ireo alika ireo ary manome anarana ratsy azy ireo. Ny fandrarana ny karazany dia tsy fomba hamahana ny olana. Ny sasany amin'ny talentan'ny Dogo Arzantina dia ny fihazana, ny fanarahan-dia, ny fiambenana, ny fiambenana, ny asan'ny polisy, ny fikarohana ny zava-mahadomelina, ny asan'ny miaramila, ny torolàlana ho an'ny jamba, fankatoavana amin'ny fifaninanana ary Schutzhund.
FCA = Fédération cynological Argentina
'Ireto misy tovovavy malalantsika Bella, Zoe ary Lucero. Dogo Arzantina dia tia mandry amin'ny masoandro fa satria karazany fotsy hoditra izy rehetra dia afaka mahazo sunburn ary mila mitandrina, indrindra amin'ny fahavaratra. Ny tabilao masoandro dia azo ampiasaina hiarovana ny hoditra mavokely amin'ny fahazavan'ny masoandro ary tokony hiditra amin'ny faritra maloka koa izy ireo. '
Firy taona ny housebreak ny alika
'Donna Auca Liu, zanako vavy Dogo Arzantina. Indraindray Dogo Argentinos dia mety misy teboka mainty eo amin'ny loha fantatra amin'ny anarana hoe 'pirata' (toetra iray amin'ny palitao Dogo eken'ny Federacion Cinologica Argentina). Donna dia be fitiavana sy tsy mivadika. Tiany ny sakafo izay tsara, satria mianatra fika haingana izy, ary ny valiny dia pellets vitsivitsy an'ny Royal Canin Maxi - Junior. Ny hany zavatra tsy hohaniny dia ny salady amin'ny ravina maintso sy ny citrus. Izy mandeha eo akaikinao: azonao atao aza ny mitondra azy mivoaka amin'ny bisikileta na skate roller ary handeha amin'ny hafainganana ihany izy . Tsy mifofofofo toy ny alika hafa izy (raha vao misy olona tsy mahazatra loatra manakaiky ny trano - rehefa lany ilay resaka dia mijanona tsy mivoaka). '
'Donna Auca Liu, zanako vavy piraty Dogo Argentino ho alik'alika 37 andro. Dogos misy teboka mainty eo an-dohany dia antsoina hoe 'piratas.' '
'Nankany amin'ny Dogos Facon tamin'ny faha-7 volana, nalain'ny sary Lankford taorian'ny fandreseny voalohany Best of Breed!'
'Kilo ao anatin'ny 10 volana ary Facon ao anatin'ny 7 volana, taorian'ny nandrombahan'izy ireo ny fandresena Best of Breed.'
Taylor Dogo amin'ny 6 taona— 'Alika voaofana tsara izy ary tia olona.'
Diego the Dogo amin'ny herintaona sy 110 lbs. (54 kg)
Diego the Dogo puppy amin'ny 10 herinandro
laboratoara mainty st bernard mifangaro alika kely
Maverick the Dogo amin'ny 1 taona— 'Nahazo ny zanakalahiko Maverick aho tamin'ny enim-bolana. Nilaza tamiko ny tompony tany am-boalohany fa tsy hanao an'io izy. Izy no miala amin'ny fako an'ny 13 ary tsy nahazo ny sakafo ilainy. Izy dia mahia ary tena nalemy, fa ny famahanana mandritra ny adiny telo sy ny fitsidihan'ny mpitsabo vetivety dia nahatonga azy io ho alika falifaly sy salama izay tia ny sakaizany Gator (a Chiantaraie ). Mifanaraka ihany koa izy alika rehetra, na lehibe na kely ary tia saka SY akoho koa. Tsy mampiseho herisetra mihitsy izy. '
Hijery ohatra misimisy momba ny Dogo Argentino
Sary Dogo Argentino 1
Sary Dogo Argentino 2
alika kely mifangaro maltese sy yorkie
Pitbull orona manga 4 volana
fifangaroana pincher kely indrindra frantsay
aussie volamena retriever mifangaro alika kely
alika 40 pounds sy ambany
afangaro amina timberwolf amidy